Izibonelelo zokwenza iMotor elungileyo yomthengi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kweli nqaku siza kuthetha ngalo Ukunxwala, siza kufunda ukuba ithetha ntoni kwaye kutheni isenziwa. Yonke into inenkcazo yayo, kwaye ukuba uyilo okanye usaqala, uyakuziqonda izibonelelo ezilungileyo zolu ncedo.
Ukuba sele uzinikezele kuyilo, uya kwazi ukuba ukwenza i-mockup yinto ethile esisiseko ukuze umthengi aqonde uyilo lwakho. Ukuba ngokuchaseneyo, uqala kweli hlabathi, qhubeka ufunda kuba yonke into esiza kukuxelela yona inomdla kuwe.
Xa sisebenza kuyilo esijamelene nalo imingeni eyahlukeneyo, kwaye enye yazo kukufumana yamkela uyilo. Ngenxa yeso sizathu, kufuneka sicinge ukuba yintoni Eyona ndlela ifanelekileyo yokuyivelisa, Ukuyithengisa kumthengi wethu. Rhoqo asinakukwazi ukuvelisa kwakhona kuba kunokwenzeka ukuba basibuze kulungiso, kwaye ngenxa yoko, siya kuba sichithe imali ngaphandle kwesibonelelo.
1 Intsingiselo yokuthotywa
2 Bonisa izindululo ezahlukeneyo
Ukuthotywa Yifoto yomfanekiso Uyilo lwakho, Oko kukuthi, kukufaka uyilo lwakho kwinkxaso. Umzekelo, ukuba senza uyilo lwe-t-shirt, i-mokcup iya kubandakanya ukubonisa i-t-shirt kunye noyilo lwethu oluprintiweyo. Obu butyebi busivumela ukuba sibe bonisa umxhasi ukuba uyilo luza kujongeka njani luyinyani. Ukuba umntu osithembise ngale projekthi akakhange ayile kakhulu kwaye akanambono ucacileyo wendlela esiya kuphuma ngayo isindululo sethu, imokcup yeyona ndlela yokuyifeza. ngaphandle kokuchitha imali. Ke ngoko, sigcina iindleko zokushicilela okanye zokunyathela. Ndiyabulela kule modeli ebonakalayo siya kufundisa umxhasi uluvo olusondeleyo ngakumbi oko kuyakusinceda ukuba samkele umbono wethu.
Bonisa izindululo ezahlukeneyo
Ngokuba nesi sixhobo simahla, singadlala ngeendlela ezahlukeneyoOko kukuthi, akufuneki sizilinganisele ekubonakaliseni ubungakanani okanye ifomathi enye. Singadlala ngokwenziwa kwamaphepha, iiwebhusayithi, ukulungelelanisa iifotomontages kwi-vinyl, imilinganiselo, phakathi kwabanye. Isiphumo iya kuba sengqiqweni ngakumbi ngaphandle kwefayile
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ukubaluleka kokwenza iMotor elungileyo
Khuphela ngaphezulu kweefayile zobugcisa ezingama-40.000 kwiZiko lobuGcisa laseChicago
Iiwebhu zokukhuphela ii-GIF's